यी हुन् उड्नुअघि जहाजको इन्जिन जाँच्ने इञ्जिनियर दाजु–बहिनी ! – Dainik Sangalo
यी हुन् उड्नुअघि जहाजको इन्जिन जाँच्ने इञ्जिनियर दाजु–बहिनी !
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन १३, २०७८ समय: ११:५३:५२
राइट ब्रदर्स’को ‘बालसुलभ बदमा’सी’ र ‘सपना’ आज आकाशमा उडिरहेका जहाज हुन्। विल्भर र ओर्भिल दुई दाजुभाइको सपनात्यति बेला जागेको थियो, जतिबेला उनीहरूको उमेर ११ र ७ वर्ष मात्र थियो।
हवाईजहाज सम्बन्धी इञ्जिनियरिङ गर्ने सुमित र सुम्निमाको बाल्यकालदेखिकै चाहना थियो। पढ्दा, खेल्दा वा जुनसुकै काम गर्दा पनि उनीहरूको छलफलको विषय ‘एयर प्लेन’ बन्ने गर्दथ्यो। जब भगबन्त विश्वविद्यालयमा पढाइ सुरू गरे, उनीहरूको हवाई उडानको सपना साकार हुने दिन नजिकिँदै गयो।
‘पढाइ सुरू भए पनि कहिलेदेखि हवाईजहाज सम्बन्धी कुरा पढ्न पाइएला भन्ने कौतुहता हुन्थ्यो,’ सुमितले भने, ‘तर, चौंथो सेमेस्टरबाट मात्रै सुरू भयो।’ उनका अनुसार त्यसअघि आधारभूत विषयमा अध्ययन हुने गर्दथ्यो।
नोटः सन् २०१७ मा प्रकाशित यो फिचर स्टोरी पठनीय भएको र जहाजको इञ्जिन कसरी जाँच हुन्छ भन्ने पाठकको जिज्ञाशाका कारण पुनः प्रकाशन गरिएको हो। सुम्निमा बुद्ध एयरबाट राजीनामा गरेर हाल अमेरिकामा छिन्। शुभदिन डटकमबाट साभार
Last Updated on: September 29th, 2021 at 11:53 am